Triptorelin Acetate Injection / Powder: Ebee ka m ga-enweta ya? - Phcoker
2. Kedu ihe eji eme Triptorelin Acetate maka?
3. Kedu ka Triptorelin Acetate si arụ ọrụ na gị?
4. Kedu otu m ga-esi jiri Triptorelin Acetate?
5. Kedu ihe i kwesịrị ịma tupu iji ya?
6. Usoro ọgwụgwọ Acetate Triptorelin
7. Nsonaazụ na-eji Triptorelin Acetate
8. Ihe Triptorelin Acetate ziri ezi maka m?
9. Ebee ka m ga-enweta Triptorelin Acetate?
A makwaara Triptorelin Acetate dị ka Triptorelin Acetate140194-24-7 bụ ihe kemịkalụ kemịkalụ nwere ọtụtụ nke sekọndrị na nke nnukwu na-anọchi anya atọm carbon dị n’ime ala, n’okwu dị mfe karị, nke a pụtara na enwere ọtụtụ atom metal, ndị ọrụ arụ ọrụ na carbon atọm na kemịkal. Isi okwu a ‘Organic’, ihe ọ pụtara bụ na mọzụlụ nwere carbon carbon dị ka atọm nke dị n’etiti. Ngwakọta osisi ọ bụla na-enwe ọnụnọ carbon ma ọ bụ ya mere carbon bụ mkpịsị ugodi nke ndụ.
A na-eji Triptorelin Acetate mee ihe n'ọtụtụ ebe dịka ọgwụ yana maka kemịkalị kemịkal n'ụlọ nyocha. Ojiji nke ọgwụ ahụ kacha mkpa n'ihi na ọ pụrụ iche. Triptorelin Acetate bụ acidic dị nwayọ ma nwee ntakịrị inye onyinye hydrogen ka ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọnụego hydrogen. O nwere usoro kemịkal nke C66H86N18O15 na nkezi ngụkọta atọm nke 1311.49 gram kwa. Ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ọgwụ nwere ike iji usoro ndị ahụ dị ka decapeptyl, okwupeptyl wdg, nke pụtara n'ogo Triptorelin Acetate. Na iji Triptorelin Acetate n'ụwa taa bụ ihe ama ama, A na-eji ọgwụ ahụ agwọ ọrịa cancer na-eto eto nke ukwuu (Na-ezo aka na gland endocrine na sistemụ ịmụ nwa nke ahụ mmadụ). Ọ bụghị naanị ọrịa kansa mana ejiri ya na ọkwa dị elu nke usoro nchịkwa homonụ, njikwa testosterone wdg amaara iji Triptorelin Acetate ma ọ bụ Injection Triptorelin, Ọ nwere ike ịba uru nke ukwuu n'ụwa taa. Ndị na-emepụta Triptorelin Acetate na-atụkwa aro na ị ga-eburu echiche ndị dọkịta gị tupu ị takingụ ọgwụ.
Triptorelin Acetate140194-24-7 bụ nke a na-akpọkarị na ọgwụ Triptorelin nke Trelstar. Ingba ọgwụ Triptorelin na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa prostate dị elu. A na-ejikwa ọgwụ mgbochi Triptorelin iji dozie homonụ na ụmụaka; Okwu banyere ya bụ na mgbe nwatakịrị ji ọrụ ike na uto ya, na-ahapụkwa homonụ ya n'oge na-adịghị anya tupu ọ banye na mmalite ntozu mmalite, a na-eji ntụtụ Triptorelin iji belata mmiri ọgwụ ahụ. Nke a na ọgwụ abịa n'okpuru nhazi ọkwa nke Gonadotropin na-ewepụta homonụ ka edeputara ya dika GnRH. Ọ na - enye aka nke ukwuu n'ịchịkwa ụmụaka na - enwe mmekọahụ nwoke na nwanyị na - efe karịa nwa na - edina ngwa ngwa. N'okwu dị mfe, a na-eji ntụtụ Triptorelin iji belata mmiri nzuzo nke iweghachi ule. Testosterone bụ homonụ nke na-ahụ maka nwoke na nwoke inwe mmekọahụ. Enwere ọtụtụ ojiji ndị ọzọ nke dọkịta gị nwere ike ịtụ aro gị dabere na mgbochi gị. Otu ga-akpachara anya banyere onunu ogwu ebe ogwu nwere ike ghara abu oru na mmadu obula, a gha achoputa nsogbu ndi ozo kariri mgbe i malitere iji ogwu ahu.
A na-ejikwa Triptorelin Acetate iji gwọọ ọrịa kansa ara na ụmụ nwanyị. Otu ihe kwesiri iburu n’uche na inyocha Triptorelin Acetate agaghị ewepu mkpụrụ ndụ kansa n’onwe ya, Ọ na-ebelata uto nke hormone nke mere na mkpụrụ ndụ kansa ga - akwụsị ịgbasa n’ime ahụ mmadụ, nke a bụ ọgwụgwọ naanị nke oge ụfọdụ na - enwe nsonaazụ nwayọ. Echefula inyocha ahụ gị mgbe niile na oge ị usingụ ọgwụ ọ bụla, a ga-akọkwara dọkịta gị ụdị mmekpa ahụ ọ bụla tupu ọ gbasie ike ma malite igosi mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Ọgwụ ya na-amalite ọrụ ya site na ịbanye n'akụkụ akwara ndị ahụ, ọ na - emebi homonụ na - akpali akpali dị ka testosterone wdg. Ihe nje ya na - eme na homonụ yana akụkụ ahụ na - ewepụta homonụ nwere ike ọ gaghị adị oke ize ndụ mana ọ ka dabere na oke ọgwụ yana mgbochi nke mmadu. Na mkpokọta, otu usoro onunu ogwu egosighi nsonaazụ ya mana otu usoro ọgwụgwọ dọkịta gị nyere ga-enyere gị aka n’usoro uto ahụ.
3. Olee otú Triptorelin Acetate work na gi?
The Isi ogwu Triptorelin (Trelstar), ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ na gland endocrine ma wepu mkpụrụ ndụ kansa. A bia na cancer nke di ezigbo nso, o putara na oria cancer agbasaala n’akwara ndi ozo site na ihe ndi n’egosiputa prostate. Mkpụrụ ndụ cancer ara na - agagharị na sistemụ lymphatic gị n’ikpere, ọkpụkpụ na eriri afọ n’ọnọdụ ụfọdụ. Triptorelin Acetate ebe a na - enyere aka iwepu mkpụrụ ndụ cancer niile na - adịgide, Triptorelin Acetate na - enyere aka n'ọrịa kansa mana na ọnụọgụ dị dabere na agụụ na nchedo gị.
Ọ bụrụ na dọkịta gị malitere ịhụbelata homonụ gị, nke ahụ kwesịrị ịbụ ọrụ Triptorelin Acetate.
Ọ bụrụ na dọkịta gị amalite ịchọpụta na mgbasa nke mkpụrụ ndụ kansa gị akwụsịla, Mgbe ahụ ọ ga-abụ ọrụ Triptorelin Acetate
Ọ bụrụ na ịmalite ịhụ mgbanwe nke ọdịdị ahụ gị, mgbe ahụ nke ahụ kwesịrị ịbụ ọrụ Triptorelin Acetate
N'okwu dị mfe Triptorelin Acetate bụ otu ọgwụ dị ka ọgwụ ọ bụla ọzọ dị na ahịa, ọ na-arụ ọrụ site na-emeso mpaghara ndị emetụtara n'ahụ gị ma na-eme nke ọma na ọgwụgwọ ahụ. Must ga-akpachapụrụ anya banyere usoro ị onceụ otu oge na oge dị n'etiti usoro ọgwụ ọ bụla.
Enwere otutu nyocha Triptorelin Acetate na ịntanetị nke nwere ike ịkọwa na omimi. Onye na-emepụta Triptorelin Acetate na-ebi akwụkwọ dị mkpirikpi na ibe enyemaka nke ngwaahịa a.
Triptorelin Acetate (140194-24-7) A na-eji ya agwọ ọrịa cancer (prostate cancer) na usoro uto nke homonụ. Dọkịta gị na-enye Triptorelin Acetate ka ọ bụrụ ụdị ịgba ntụtụ, ọ na-abụkarị, ịgba ntụtụ ahụ ga-abụ otu ugboro n’ime izu 4 ọ bụla (nke a nwere ike ịdị iche na ọnọdụ ahụike gị na mgbochi). Must ga-akpachara anya n s usoro iji zere nsogbu ọ bụla na-adịghị mkpa. Ka ị baara gị uru, m na-adụ ọdụ ka ị kaa akara ụbọchị gị na kalenda ma were oge na-egbu Triptorelin Acetate na ọnụ ọgụgụ ziri ezi maka nsonaazụ kacha mma. Ihe mgbochi ụbụrụ bụ oke alụlụ a na-ahụkarị mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a. Na nke a, ị ga-agakwuru dọkịta gị ma ịkwesịrị ịrụ ọrụ nke a na nhazi gị. Na agbanyeghị, nke a ga-abụ maka izu ole na ole mbụ. Oge njupụta, ọgbụ mgbu nwere ike ịbụ mgbaàmà ndị ọzọ ole ị fewụ ọgwụ a mana ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ha na-abawanye n'ihe mgbu. ọ bụ ezie na enweghị ezigbo mmetụta ọ bụla dị egwu ọ na-akpata, ọ nweghị ihe dị njọ ịnọ n'akụkụ nchebe mgbe ị na-anwale ọgwụ ọhụrụ. Don'tjọ atụkwala gị, ọgwụ ga-enyere gị aka ma ị na-enyere dọkịta gị aka mgbe niile. N'oge ọ bụla n'oge oge ọgwụ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ dọkịta gị n'ihe metụtara ọgwụ ọ bụla. Ndị ọkachamara gị ga-akọwapụta gị ma m jiri obiọma gwa gị ka ị ghara ịhapụ oge ọ bụla ịsụ ọgwụ ma ọ bụ oge ọgwụ ahụ.
Ndị mmadụ na-arịa ọrịa cancer ma ọ bụ ihe gbasara itolite na-ejikarị Triptorelin Acetate. Ha kwesịrị ịma na enwere ike ịgwọ ọrịa ahụ oge ha na-abịa n'oge. Ha ga-agakwuru dọkịta / ọkachamara ha site n'oge ruo n'oge banyere mmetụta na-emetụta ma ọ bụ ihe mgbaàmà ya, Mgbe ụfọdụ mmetụta ọghọm ndị ọzọ leghaara anya ga-etolite ma nnukwu nsogbu. Ekwesiri ilebara ihe ndị a anya tupu ị usingụ ọgwụ ọ bụla dị ka ọgwụ. Onye ọrịa ahụ aghaghi iburu n’uche na inyocha Triptorelin Acetate agaghị ewepụ cancer kpamkpam n’otu oge, ọ na - akwụsị homonụ nke n’onwe ya na - akwụsị uto mkpụrụ ndụ kansa. Ọgwụ a anaghị ewepụ ọrịa cancer n’ahụ gị; Ọ na-agwọta nwayọ nwayọ ma kwụsie ike site n'ịhapụ ya ka ọ too. Ikwesiri ịchọ Nyocha nyocha Triptorelin Acetate. Ọbụlagodi na enwere ndị enyere, ọ nweghị ihe ọjọọ dị na ịchọrọ nyocha ahụ Triptorelin Acetate na ịntanetị.
Usoro ọgwụgwọ Acetate Triptorelin Acetate bụ ihe dị iche iche na-egosi na ịdị mkpa nke okwu a yana ahụike nke onye ọrịa. Usoro ọgwụ Triptorelin Acetate dabere na mgbochi nke onye ọrịa.
Usoro ọgwụgwọ ọnwa nke 1
Ntinye Triptorelin ma obu Trelstar bu ezigbo ogwu ma oburu na enyere ogwu ogwu ahuru nke oma.
Maka otu ọnwa nke na-eji nwayọ nwayọ, Trelstar na-atụ aro ka etinye ya na 3.75mg na mmiri mmiri 2ml distilled dị ka ntụtụ. Nke a ga - aga n'ihu otu ọnwa. Nke a ga-abụrịrị ọgwụ intramuscular. mmiri 3.75mg Triptorelin Acetate + 2ml ga-arụ ọrụ dị ka ntọala peptide. Usoro onunu ogwu a na –esi n’ime obara n’arụ akwara ike ma na - ebelata oke homonụ maka nsonaazụ.
Ekwesịrị iji usoro onunu ogwu a mee ihe site na iji obere agịga 21 ma ọ bụ usoro nnyefe otu.
Usoro ọgwụgwọ ọnwa nke 3
Maka ọgwụ na-ewepu ọnwa atọ, Trelstar na-atụ aro ka etinye ya na 11.25mg na mmiri mmiri 2ml distilled dị ka ntụtụ. Nke a ga-aga n’ihu n’ime ọnwa atọ ọ bụla. Nke a ga-abụrịrị ọgwụ intramuscular. mmiri 11.25mg Triptorelin Acetate + 2ml ga-arụ ọrụ dị ka ntọala peptide. Usoro onunu ogwu a na –esi n’ime obara n’arụ akwara ike ma na - ebelata oke homonụ maka nsonaazụ. Ekwesịrị iji usoro onunu ogwu a mee ihe site na iji obere agịga 21 ma ọ bụ usoro nnyefe otu.
Usoro ọgwụgwọ ọnwa nke 6
Maka ọgwụ a na-eji nwayọọ nwayọọ wepụta ọnwa isii, a na-atụ aro ka Trelstar dosa ya na 22.5mg na mmiri mmiri 2ml distilled dị ka ntụtụ. Nke a ga-aga n’ihu n’ime ọnwa isii ọ bụla. Nke a ga-abụrịrị ọgwụ intramuscular. mmiri 22.5mg Triptorelin Acetate + 2ml ga-arụ ọrụ dị ka ntọala peptide. Usoro onunu ogwu a na –esi n’ime obara n’arụ akwara ike ma na - ebelata oke homonụ maka nsonaazụ. Ekwesịrị iji usoro onunu ogwu a mee ihe site na iji obere agịga 21 ma ọ bụ usoro nnyefe otu. Usoro ọgwụgwọ Acetate Triptorelin Acetate nwere ike ịdị iche iche dịka nke a ka mma iji ndị dọkịta.
Can nwere ike iji Triptorelin Acetate na oge usoro izu ike ọ bụla. Ga-ejikwa ya mgbe ndị dọkịta nyere ikike, ma naanị mgbe o nyesịrị gị ọgwụ a.
Mgbe ịmalite iji ọgwụ Triptorelin Acetate, ọkachasị mgbe ịmalitere ọgwụ a, nke a nwere ike ịbawanye homonụ a kapịrị ọnụ, ndị a bụ ọnọdụ yiri nke a na-agwọ. Agbanyeghị, nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu mana enwere mmetụta ọzọ dị njọ nke a ga-eme maka ngwa ngwa. Ihe mgbochi mmamịrị, ọnya ụfụ na ọbara na urination bụ ụfọdụ n'ime mmetụta dị njọ dịka Trelstar na-emekọ na mpaghara prostate. Ndị a na - ebute n'ihi ịsụbiga mmanya ókè ma ha ga - adị nwa oge ka ahụ gị na - ewulite sistemu na - ere ọgwụ ọhụụ. Emeputa Triptorelin Acetate enweghị ihe ọ bụla gbasara ya na mmetụta nsonaazụ gị.
Agbanyeghị, ekwesighi inye ọgwụ ime ọgwụ ka ndị inyom dị ime ebe ọ nwere ike ibute nwata ahụ.
Triptorelin Acetate na-ebute mbelata nke homonụ nke ukwuu, Na-emekwa ka Triptorelin Acetate rụpụta mbelata ọrịa kansa gị. May nwere ike na-emeso nsogbu ndị a ọ bụla metụtara Triptorelin Acetate.
Ọ ka mma ịkpọtụrụ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọta otu n'ime mmetụta ndị a Triptorelin Acetate:
Anọgide na-ama ọria na-akpata oyi, akpịrị kpọrọ nkụ nke na-akpata ụkwara
Ọnwụ na-ewe iwe na oge ọgbụgba na-ama ya mgbe niile
Ọrịa afọ ọsịsa na nsogbu nri.
Ahụ mgbu ma ọ bụ ụdị ọzịza ọ bụla na mpaghara ahụ etinyere
Jiri mmụba obi ya na ọkwa BP dị elu na shuga dị elu
Ike adighi adi ike, akwara aru na ogugu
Azụ mgbu na-akụda mmụọ
A mbelata ahu ume
Ire na-enweghị ike ịghọta uto
Isi ure n’iku ume
Ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-abawanye na ahụ ọkụ
Isi ọwụwa na anya isi
Mmetụta ndị a Triptorelin Acetate bụ ihe ndị ọzọ ọ na-akpata ma ọ bụghị ndepụta zuru ezu. Ndị ọzọ nwere ike ime dabere na ọnọdụ ọ bụla. A dụrụ gị ọdụ ka ịmụrụ anya ma kọọ dọkịta gị maka enyemaka ọ bụla ọzọ.
Mgbe ị na-a medicationụ ọgwụ a, Ọgwụ ahụ na-esite n’arụ mmiri ndị dị ka ọbara, mmamịrị wdg O kwesiri iburu n’obi na onye ọrịa a na-a theụ n’ ọgwụ ahụ ekwesịghị imetụ otu mmiri a aka ọbụlagodi maka awa 48. Ngwunye ịcha acha (maka ndị na-elekọta ya) dị mkpa ka ị na-eji ọgwụ.
Youkwesịrị ịgwa dọkịta gị banyere ọgwụ niile ị na-aga n'ihi na Triptorelin Acetate nwere ike meghachi omume na ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị akacha mma maka ọgwụgwọ ahụ.
Triptorelin Acetate ziri ezi maka ị nyere gị nsogbu nke homonụ. Onye ọ bụla nwere nsogbu a nwere ike iji Triptorelin Acetate ma e wezụga ụmụ nwanyị dị ime. Ọzọkwa, ị ga-ewere echiche ndị dọkịta gị ka ị tụlee ọgwụ ahụ ebe ọ nwere ike ịma gbasara ahụ gị nke ọma. A ga-ebu ụzọ gwa dọkịta gị ihe ọ bụla metụtara ahụike ma ghara iji onwe gị atụnyere ihe ọ bụla ọzọ na-aga otu ọgwụ, gị abụọ nwere ike ịlụ ọgụ na usoro iri nri, mmadụ niile abụghị otu. Triptorelin Acetate na-ebute ọgwụgwọ ahụ, ọ bụrụkwa na ọ bụ gị chọrọ ya, ọ dị mma maka gị. Triptorelin Acetate ntụ ntụ ma ọ bụ Trelstar, Ọbụna nke a nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Triptorelin Acetate ntụ ntụ dịtụ ọnụ ala karịa ịgba ntụtụ. Mana ntụtụ ahụ gosipụtara nsonaazụ ka mma ma e jiri ya tụnyere Triptorelin Acetate ntụ ntụ.
You nwere ike ịzụta Triptorelin Acetate na ụlọ ahịa ọgwụ echekwaara echekwa. Can nwere ike ịga leta ngalaba ọ bụla Phcoker iji nweta Triptorelin Acetate gị na oke ọnụ ala. Na-elele ika mgbe niile na ụbọchị mmebi tupu ịzụrụ Triptorelin Acetate.